Cheetah - ezigbo anu anu
Ndị ọzọ Ụmụ anụmanụ
Ndụ n'okpuru anyanwụ na-ekpo ọkụ dị adị na njedebe nke omume. A pụghị ịkpọ ya obi ụtọ ma ghara ịdị ọcha. Ọbụna ụdị anụmanụ na-ekwu banyere nke a: site na anya ruo n'akụkụ ọnụ, dị ka anya mmiri, gbatịa obere akpụkpọ anụ abụọ, na-enye onye na-eri anụ ahụ mwute na ọbụna enweghị obi ụtọ.
Ọ ga-adịgide ndụ kwa ụbọchị na ọnọdụ ọkụ nke dị n'Africa, ichu nta na ijikwa iri anụ ya, chebe ụmụ na ókèala site na ndị na-anụ ọkụ.
Ihe a niile na - eme ka a cheetah - ezigbo anụ ọhịa na - adịghị ike. N'agbanyeghi ihe ndi a na-emeghi ka o mee, o nwere obi iru ala na udo. Ndị a bụ ezigbo nwamba, Otú ọ dị, obere ọhịa. Ụda ụda ha na-ada dị nnọọ ka ihe ndị anyị na-eme.
Mgbe cheetah - ezigbo anụ cat nwere afọ ojuju ma jupụta, ọ na-eto eto dị ka nnukwu anụ ụlọ. N'olu ya, ị nwere ike ịnụrụ ihe ọ bụla dị ụda anụ ụlọ. Site na akwa purr, ahụ dum cheetah na-ama jijiji. Nke a na-adọrọ mmasị karịsịa mgbe ezinụlọ dum cheetah na-egosi obi ụtọ. Ụmụ anụmanụ na-eto eto na-agbọ ụja, na-egwu egwu, na-azọpụkwa ụra ma na-ata ikikere ezé ha. Ụmụaka - na-ata ma na-afụ mkpọrọhịhị. Olu ndị a na-acha uhie uhie na-eyikarị olu nnụnụ. A na-anụ "nnụnụ a na-agbagharị", nke ndị toro eto na-ebi, nwere ike ịnụ n'ebe dị anya na kilomita abụọ - ya mere ụmụ anụmanụ na-ekwurịta okwu na ndị ikwu ma ọ bụ ụmụ ha.
Ebu arọ nke anụ ahụ bụ 40-60 kg. Ọ bụ ịdị ọcha, nakwa dị ka ọmarịcha ụdị ahụ, nke na-enye ohere maka cheetah ịzụlite ọsọ ọsọ na agba ọsọ. O nwere ụkwụ dị mkpịsị ụkwụ ogologo, ahụ dị nkwụ, azụ azụ na ọdụ ogologo, nke na-enye aka mee ka atụghị anya ya ma ọ bụrụ na ọ na-atụgharị anya na-agba ọsọ zuru oke, karịsịa mgbe ikpe na-agba mbọ ịgbanahụ ya. Ọ bụrụ na anụ ọhịa ahụ dị mma, enweghi ohere ịhapụ onye ahụ. Enweghị ike dị mkpa nke mmetụta, dịka ọmụmaatụ, dị ka ọdụm, a na-akwụ ụgwọ ọsọ ọsọ, nke bụ ngwá agha kasị mma na uru dị ukwuu nke onye na-eri anụ. Maka ọgụ ngwa ngwa, ọ chọrọ 15-20 sekọnd - ogologo mita nke mita 6-8 na-enye ya ohere ịnweta anụ oriri ya ngwa ngwa. Na ngwa ngwa nke cheetah nye onye ahu ozo - ihe ndi ozo. N'ịkọda isi ya, na-ejighị ala na-abaghị uru, ọ na-adakwasị onye ọ na-ama ya dị ka 80 ruo 120 m, na-agbaso ọsọ ọsọ na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na anụmanụ a na-achụ ọsọ adịghị adaba n'ụkwụ ụkwụ nke cheetah - ezigbo anụ ọhịa na sekọnd mbụ nke ọgụ ahụ, a ka nwere ike ịzọpụta ya: cheetah dị mfe ịmalite ọzọ ma ọ bụghị ịchụso antelope ogologo oge. Ná nkezi, naanị ọkara nke mmegide niile a na-ebido na-ebute nke ọma. Iji hụ na mmeri, onye na-eri anụ na-ahọrọ anụ ahụ kachasị ike n'ime ìgwè ehi ahụ. Na sneaks dị na ifufe, ka onye nwere ike ghara ịnụ isi iyi egwu. Iyi na ihe na-acha ọcha na-eme ka cheetah ghara ịhụ ya na ebe ọ ga-esi emetụta àgwà ya na sprinter. Ụfọdụ cheetah nwere ike isonye na ichu nta ma ọ bụrụ na ha na-ebikọ ọnụ. Nke a na-eme ka o nwekwuo ihe ịga nke ọma. Ma onye cheetah gburu onye ahụ gburu ya. N'adịghị ka ndị ọzọ na-eri anụ, anụmanụ a anaghị eri anụ ọ bụla onye ọzọ gburu, ọ dịghịkwa eburu ihe ọ bụla na-adịghị mma. N'ime oke nri, o bu ihe omuma. Ma ọ bụrụ na ọtụtụ ụbọchị n'ahịrị, ọ dịghị nke ịchụ nta ọ na-agwụ na nri ehihie, n'ihi ụnwụ, ọ na-ebelata, nke mere na ohere nke ịga nke ọma na-adị obere.
Ọfọn, ọbụna cheetah na-adịghị mma - ezigbo anụ ọhịa na-emekarị ka ọ hapụ ụkpụrụ ya. Họrọ nchapu ha agaghị eme, mana ị ga-emerụ ntụpọ ha, nke cheetah anaghị amasị. Ọ bụrụ na ị na-ezoro nwayọọ nwayọọ gaa ọdọ mmiri ahụ, i nwere ike ijide ya, ọ bụ ezie na nnụnụ ụfọdụ funahụrụ ya. Ihe-obughi, mana otu nri. Otú ọ dị, a na-eji ọgwụ ọjọọ ndị dị otú ahụ eme ihe n'oge na-adịghị anya. Ma ọ bụghị ọbụna banyere ịdị ọcha na ụjọ nke wetting paws. A na-abanyekarị ọdọ mmiri n'akụkụ mmiri, nke hụrụ nwamba na-agbalị izere nzukọ. Maka otu ihe ahụ, ha nwere ike n'enweghị mmiri ọbụna ruo ọtụtụ izu. Na oge ndị a na-adịghị adịte aka mgbe cheetah ka na-ejuputa enweghị mmiri n'ime ahụ, ọ na-akpachara anya ma na-aṅa ntị. Ọ bụrụ na afọ ndụ nke ndị okenye ndị a dị jụụ ma na-enwe ọganihu n'ịchụ nta na-esote usoro ihe omume, nri ha na-eri bụ Thomson ghazals, impala, hares, rabbits na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. Ma na cheetah enweghi nsogbu na-esi n'erighị ihe na-edozi ahụ ma nwee ebe ọ ga - agba ọsọ mgbe ọ nwụsịrị, ebe ebe ịchụ nta kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 100-150 km2.
Inwe ihe oriri bụ naanị ọkara ọrụ. Nchedo ya nwere ike isiri gị ike karị. Cheetahs na ego ọ bụla zere esemokwu na ndị ọzọ na-eri nri, ma ha bụ okenye ọdụm, nkịta ọhịa ma ọ bụ edo. Ee, ha dị okpukpu karịa nke abụọ gara aga, mana nha ha adịghị atụle ya na ike dị ike nke anụ ndị a. Ya mere, mgbe onye iro ahụ na-abịakwute anụ anụ anụ cheetah jidere, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme kama ịla ezumike nká.
Ịchụ nta ga-amalite ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe a jidere ma gbuo ya, cheetah dị ezigbo mkpa maka ezumike iji nweta ume ha. Ọ bụ ihe gbasara physiology nke anụ ọhịa: ọ na-amalite nnukwu ọsọ, na ọbụna n'okpuru anyanwụ na-egbu. Mmiri dị n'ime ya na-arị elu dị elu ma ọ bụrụ na cheetah anaghị akwụsị ma dị jụụ, mgbe ahụ, oké iwe ọkụ ahụ na-eyi ya ụbụrụ ụbụrụ na ọnwụ. Otú ọ dị, nkwụsị a dị oké mkpa nwere ike ịdị oké ọnụ - ọ bụrụ na e nwere onye ọzọ na-eri anụ dị nso, cheetah ga-ekwu na ọ bụ ezigbo nri ya. Ngwurugwu ya dị mfe izu ohi, n'ihi na a na-ebute obere ihe nke anụmanụ a maka ọsọ ọsọ ọsọ karịa maka ịlụ ọgụ. Mgbe ụfọdụ, ìgwè anụ ọhịa ma ọ bụ nnụnụ nwere ike iburu otu anụ si na cheetah, na-atụ egwu ya na-eti mkpu ma na-efesa nku ya. Ozugbo, mkpu nke ndị na-ekpo ọkụ ga-agba hyenas, jackals, otu ọdụm ma ọ bụ agụ owuru. Ya mere, iji nweta nri ma rie ya, cheetah - ezigbo anụ ọhịa - kwesịrị ime ihe niile ngwa ngwa o kwere: ịchụso, gbuo, rie.
N'ime ezinụlọ cheetah, nne ma ọ bụ nna bụ otu nne, onye chọrọ ịkwadebe ụmụ ya maka ndụ ọjọọ. Mgbe a mụsịrị ụmụ ntakịrị, ọ na-achọ ebe ha ga-ezo ma chebe ụmụ site na ndị na-eri anụ. Ebe ọ bụ na ọnụ mmiri ahụ adịghị adaba, ọnụ ụlọ "ụmụaka" dị, dịka iwu, n'etiti etiti osisi dị egwu. Ụmụ nwanyị cheetah na-echebe ụmụ ya n'atụghị egwu ma zoo ha n'ụzọ zuru oke site na ndị iro ha, na-ebu ndị na-eto eto site n'otu ebe ruo ebe n'oge ọnwa mbụ nke ndụ ha.
Ịdị ọcha abụghị naanị ihe na-egosi na ahụike nke ụmụ ya, kamakwa ihe na-emesi obi ike na ọ ga-abụ onye iro nke ụbụrụ na-adịgide adịgide dọtara. Otú ọ dị, n'agbanyeghị mgbalị nile nke ndị nne na-echebe ụmụ ha pụọ ​​na nsogbu, nanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụmụaka site na nwata ahụ na-adị ndụ ruo mgbe ha toro. Ihe ọzọ bụ iji kpuchie ụmụaka ahụ n'oge nri. Ọdụm ma ọ bụ ndị ọzọ na-eri anụ na ohere mbụ ọ bụghị nanị na-ewepụ anu ahụ, ma na-egbu ndị na-eto eto.
Ugboro ugboro, nwanyị aghaghị ịhazi ọtụtụ ọgụ ụbọchị iji zụọ ụmụ ya. Site na nwata, n'etiti obere cheetahs, enwere njikọ siri ike nke ezinụlọ. Ha na-etolite etolite, na-eri nri ma na-egwuri egwu, na ndi okenye ha na-ebikọ ọnụ na ichu nta. Ha nwere ike ibikọ ọnụ ọbụna tupu ha emee agadi. Naanị ụmụ agbọghọ na-eto eto ga-enwe nwa. Ihe kachasị mkpa nke obere cheetah ga-amụta na ọnwa mbụ nke ndụ bụ ịchụ nta. Maka ụmụaka, ọ na-amalite na egwuregwu. Na-achụ ibe ha, na-ejide onwe ha ma na-agbagha, ha na-emezi nkà ha. Mgbe nne na-achụ nta, a gwara ha ka ha nọdụ ala n'osisi ma ghara igbochi ya ka ọ ghara ịtụ egwu anụ ahụ ma ọ bụ ihe ọghọm na-enweta n'okpuru mkpịsị ụkwụ. Ebe ọ bụ na ha nwere mmuo ịchụ nta site n'oge ha bụ nwata, ha nwere ike ịbanye tupu oge na "enyemaka" nurse ha. Nne enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịmalite ịmalite na ịwakpo ọzọ.
Ndị cheetah na-aghọ onwe ha otu afọ na ọkara. N'oge a, nne na-ahụ n'anya agaghịzi enwe ike ịchọ, jide ma gbuo anụ maka kittens nke toro ogo ya. Ịhapụ bụ obere ihe mgbu, nne na-ahapụ ụmụaka ndị toro eto na-ekpuchi ha n'abalị, na-esi n'ebe ha nọ pụọ dị ka o kwere mee. Site na oge a, ụmụ na-eto eto na-amalite ndụ okenye. Nwanyị na ọnwa ole na ole ga-adị njikere inye ndụ nwa ọhụrụ a mụrụ maka ọsọ.
Otu esi echekwa ihe n'ulo n'ulo
Kedu otu esi kpoo nkita iji kpoo ihe ndina?
Esi elekọta nwamba nwamba
Ndị na-arịa ọrịa na-egbuke egbuke na ụmụaka
Ọrịa na ezi pigs
Kedu nke kachasị mma maka mposi nke cat?
Kedu otu esi eme ma ọ bụ mee nyxes ka nwamba
Nri si biya si poteto
Otu esi eme ka gerbera too n'ulo
Ntụziaka maka salad salad na painiapulu
Ebee ka mgbagwoju anya nke "na-akwa iko" si abịa na otu esi emeso ya
Agụụ umengwụ na chiiz
Nri ehi a na-ata ahịhịa na Italian
Mma na aka gị: ihe nzuzo site n'aka Kim Kardashian
Uwe mgbede maka zuru ezu
Kedu otu esi ekpebi ebe ị ga-amalite ahịa?
Azụ na-afụ ụfụ n'oge ime ime
Achicha na igwe
Anụ anụ ọkụkọ na painiapia na unere
Kuki Esi Nlecha Almond
Strudel na pears
Iwu nke ezi ụda na nkwurịta okwu
Uwe nke silk eke
Ngwurugwu a na-atụ egwu na kabeeji kale na Feta
Osisi nkwụ - ihe ịrịba ama nke ọrịa siri ike?